ဂေါတမဗုဒ္ဓဘုရားလောင်းဆုပန်ခြင်းနှင့် နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူသော ဘုရားရှင်အမည် | မေတ္တာရိပ်
← မဟာပဒေသာ (ခေါ်) ပိဋကတ်တော် စည်းမျဉ်း
ပါရမီ ၁၀ ပါး (အပြား ၃၀) →
ဂေါတမဗုဒ္ဓဘုရားလောင်းဆုပန်ခြင်းနှင့် နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူသော ဘုရားရှင်အမည်	Posted on August 28, 2009	by mettayate ဘုရားအဖြစ်ဆုတောင်းပြည့်ရန်အင်္ဂါ ၈ ပါး
၃) ဆုတောင်းချိန်တွင် ရဟန္တာဖြစ်နိုင်လောက်သည့် အကြောင်းပါရမီပြည့်စုံနေခြင်း၊
၄) သက်တော်ထင်ရှား ဘုရားတစ်ဆူဆူအထံတော်၌သာ ဆုပန်ရခြင်း၊
၅) ဆုပန်သူသည် ရသေ့၊ ရဟန်းတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်ရခြင်း၊
၆) ဈာန်သမာပတ် ၈ ပါး ရရှိနေသူဖြစ်ရခြင်း၊
၇) မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့အား အသက်ကိုပင် စွန့်လှူထားရခြင်း၊
၈) ဘုရားဖြစ်ရန် ကြီးမားသောဆန္ဒ၊ ၀ီရိယရှိရခြင်း။
ဂေါတမဗုဒ္ဓဘုရားလောင်းသည် ၂၀ အသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်းကာလအတွင်း ဘုရားရှင်ပေါင်း (၅၁၂၀၂၇) ဆူတို့ထံတွင် စိတ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ နှုတ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးဖြင့်လည်းကောင်း ဖူးမျှော်ပြီး ဘုရားဆုပန်ဆင်ခဲ့၏။
ဂေါတမဘုရားလောင်းသည် ဘုရားဆုကို စိတ်ဖြင့်သာ ကြံစည်တောင့်တခဲ့သောကာလမှာ (၇) အသင်္ချေဖြစ်ပြီး ထိုကာလအတွင် ဘုရားရှင်ပေါင်း(၁၂၅၀၀၀)ဆူ ပွင့်တော်မူခဲ့ကြ၏။
နှုတ်ဖြင့် ဘုရားဆုပန်ခဲ့သောကာလမှာ (၉) အသင်္ချေဖြစ်ပြီး ထိုကာလအတွင် ဘုရားရှင်ပေါင်း (၃၈၇၀၀၀)ဆူ ပွင့်တော်မူခဲ့ကြ၏။
ဤ (၁၆) အသင်္ချေကာလအတွင်း ဘုရားရှင်ပေါင်း (၅၁၂၀၀၀)ဆူ ပွင့်တော်မူခဲ့ကြသည်။
ဂေါတမဗုဒ္ဓဘုရားလောင်းသည် ထိုဘုရားရှင်များထံမှ ဘုရားဆုပန်ဆင်ခဲ့သော်လည်း နောင်အခါတွင် ဘုရားဖြစ်လိမ့်မည်ဟူသော ဘုရားရှင်တို့၏ ဗျာဒိတ်တော်ကို မရရှိခဲ့ပေ။
ဘုရားအဖြစ်ရရှိရန် ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးဖြင့် ကြံစည်တောင့်တခဲ့သော လေးအသင်္ချေကာလတွင်း ဘုရားရှင်ပေါင်း (၁၃)ဆူပွင့်တော်မူခဲ့ပြီး ဆက်လက်၍ ကမ္ဘာတစ်သိန်းအတွက် ဘုရားရှင်ပေါင်း (၁၆) ဆူပွင့်တော်မူခဲ့ကြသဖြင့် စုသုပေါင်း (၂၉)ဆူ ပွင့်တော်မူကြ၏။
ဂေါတမဗုဒ္ဓဘုရားလောင်းသည် နောက်ဆုံး လေးအသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်းအတွင်း ဘုရားရှင် (၂၇)ဆူထံတွင် ဘုရားဆုကြီးပန်ခဲ့ရာ၌ ရှေးဦးစွာပွင့်တော်မူခဲ့ကြသည့် တဏှင်္ကရာဘုရား၊ မေဓင်္ကရာဘုရား၊ သရဏင်္ကရာ ဘုရားသုံးဆူတို့ထံမှ နောင်အခါတွင် ဘုရားဖြစ်လိမ့်မည်ဟူသော ဗျာဒိတ်တော်ကို မရရှိခဲ့ဘဲ ဒီပင်္ကရာဘုရားရှင်မှစ၍ ကဿပဘုရားရှင်အထိ နှစ်ကျိပ်လေးဆူကုန်သော ဘုရားရှင်များထံမှသာ နိယတဗျာဒိတ်တော် (ဤသူကား ဤမည်သောကမ္ဘာ၌ ဤအမည်ဖြင့် ဘုရားစင်စစ်ဧကန်ဖြစ်လတ္တံ့ဟု တစ်ဆူဆူသော သက်တော်ထင်ရှားရှိသည့်ဘုရားရှင်က အတိအကျ မိန့်တော်မူခြင်း) များ ရရှိခဲ့ပါသည်။
ပွင့်တော်မူပြီးသော ဘုရားရှင်ပေါင်း (၂၈)ဆူ (နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူ)
၃) သရဏင်္ကရာ ဘုရား၊
အညွှန်း – ဦးသက်စိန် မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာ့အခြေခံစာအုပ်။
This entry was posted in မြတ်ဗုဒ္ဓ ဂေါတမ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← မဟာပဒေသာ (ခေါ်) ပိဋကတ်တော် စည်းမျဉ်း